Mitsangàna Endorsements — Trip LEE - OFISIALY SITE
"Trip ny nanoratra boky izay mihevitra aho fa ny olona rehetra dia mila tanora mba hamaky. Ny fitiavany an'i Jesosy sy ity taranaka ity dia tonga amin'ny alalan'ny mafy sy mazava ny teny rehetra pejy. Tsy andriko ny hahita ny fiantraikan'ny manana ity hafatra ity amin'ny taranaka izany noana ny tanjona. "
- Lecrae, Grammy hanomezako- mandresy mpanakanto @lecrae
"Mitsangàna dia mahatalanjona boky hoe nambabo ny fon'ny ny kolontsaina. Raha vao Noraisiko ilay izy azoko Izy Io. Trip fanamby anao mba ho TENA, ary mampiseho aminao ny fomba hahafahanao hiaina ny ainy ho olon-dehibe tanora eto amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Lehibe Vakio. "
- Sam I, NFL linebacker, maha-olona @thesamacho
"Trip nanoratra ny boky tiako Efa namaky aho fony aho mbola kely. ny fitiavany, fahendrena, ary ny faniriana ny hanohitra ny tanora dia ny fanekena ho amin'ny asa ny manao amin'ny alalan'ny Trip sy ny asa dia atao amin'ny alalan'ny antsika rehetra. "
- Kirk Franklin, Grammy loka- nahazo sy multi-platinina peo mpanakanto @kirkfranklin
"Tiako namaky Mitsangàna. Imbetsaka ao amin'ity boky ity ny tenako hitako medi- tating ny pejy rehefa mamaky azy. Nampahery ahy, ara-tsindrimandry, sy fanamby an-dalana rehetra. Ny kolontsaina manantena antsika mba handany fotoana, fa Tian'Andriamanitra hampiasa ny fotoana ho an'ny fiantraikany na inona na inona ny taona. Izany dia mahagaga hamaky ho an'ireo izay te-hampiasa ny fotoanany amim-pahendrena ary manova ny Fanjakana. "
- Justin ny Fanapahan-kevitra, NFL mihazakazaka indray @JForsett
"Matetika isika no miresaka momba ny te hanao ny fahasamihafana, nefa tsy tena mifoha ka manao na inona na inona. My Buddy, Trip Lee, nanoratra ny boky izay mandrehitra afo eo ambanin'ny taranaka izany nampianarina handray ny mora lalan-kivoahana. Izy no fanamby antsika mba 'hitsangana', ary hiaina ao amin'ny tantara fa ny namorona ho antsika. Fantatro aho dia manolotra ity boky ity ny olona rehetra fantatro. "
- Stephen Curry, NBA mpilalao @ stephencurry30
Afaka mividy ny boky vaovao Trip, Mitsangàna, na aiza na aiza boky amidy. Fantaro bebe kokoa amin'ny Risebook.tv
Kelvin masiala carpinteyrovru • Janoary 26, 2015 amin'ny 2:42 PM • navalin'i
Am in Zambia Lusaka, raha izany no tonga eto?
Innocent • Janoary 26, 2015 amin'ny 2:42 PM • navalin'i
Rahoviana no ho any Afrika
WIZEMAN • Janoary 28, 2015 amin'ny 4:11 aho • navalin'i
Zambia izahay, miandry
Kemi iDream • Janoary 28, 2015 amin'ny 11:47 aho • navalin'i
Nahatsapa ho voatosika mba hividianana, Mitsangàna mba hanohana ny namany tanora nampiely ny zotom-po 'Andriamanitra. Rehefa mamerina izany intsony, Indray aho nahatsapa tsy an-kijanona mba hividy ny boky. Io maraina aorian'ny vidin, Afaka mamaky ny handroso ary be dia be voaheloka! Aho dia tena faly mamaky ny andinin-teny, ary feno fankasitrahana fa nihaino ahy ny Tompo tugging hanohana ny antony.
Natahotra aho fa ilay boky dia Mitarika tsikelikely ny tanora ho amin'ny olona, ​​fa Mino aho fa na iza na iza dia afaka hahazo zavatra avy amin'ity boky ity. Aho niala fotsiny famakiana ny pejy vitsivitsy voalohany.
Misaotra Trip Fa iza ianao ary inona no ataonareo ho an'ny Fanjakana!
Phil • Febroary 3, 2015 amin'ny 1:01 aho • navalin'i
Cant Andraso To Recceive ny Copy In Oganda!
Tireo • Jolay 17, 2015 amin'ny 11:01 aho • navalin'i